Bazojeza obhongoza abaphazamise okaKathrada eThekwini | Eyethu News
Bazojeza obhongoza abaphazamise okaKathrada eThekwini
‘Siyayigxeka kakhulu lento singumbutho wentsha sithi angeke sikwamukele.”
UHLULEKE wancama uSihlalo we-ANC KwaZulu-Natali uMnuz Sihle Zikalala ukulawula iqulu labantu abebephazamisa umcimbi wesikhumbuzo sesishoshovu somzabalazo uMnuz Ahmed Kathrada ofihlwe emasontweni edlule. isithombe: Mthandeni Madlala
BAZOQONDISWA izigwegwe abaphazamise inkonzo yesikhumbuzo sikaMnuz Ahmed Kathrada, obeyisishoshovu se-ANC esingasekho ebiseSastri College eThekwini ngeSonto.
Lokhu kushiwo nguSihlalo we-African Congress Youth League uMnuz Kwazi Mshengu otshele iKZN Eyethu ukuthi abasoze bavumelana nokwenziwe ngamalungu ombutho ngokuphazamisa ukuqhubeka kwezinkulumo ebezikhulunywa ngalesi sithwalandwe esinguMnuz Kathrada.
Abaphazanyiswe kulesi sikhumbuzo nguDkt Zweli Mkhize onguMgcinimafa we-African National Congress kuzwelonke noMnuz Pravin Gordan oyilungu le-ANC, abagcine bengaqhubekanga nezinkulumo ngenxa yokuphazanyiswa ngamalungu avele acula.
UMnuz Mshengu uthi abasoze bavumelana nalokhu kuziphatha kwamalungu futhi kuveza ukungahloniphani eqenjini.
Kule liculo bebethi uMnuz Gordhan akanandawo KwaZulu-Natali futhi uMengameli weZwe uMnuz Jacob Zuma akayindawo.
“Siyayigxeka kakhulu lento singumbutho wentsha sithi angeke sikwamukele ukubakhona kobhongoza abaphehla udlame ngokuphazamisa imicimbi yethu, lokhu asivumelani nhlobo nje nakho,” kusho uMnuz Mshengu.
Isimo siqhubekile nokushuba, saphazamisa inkulumo ngesikhathu ekukhuluma uMnuz Gordhan. Kuphinde esifanayo nakuDkt Zweli Mkhize oze waqeda ukukhuluma kungekho obemnakile.
UMnuz Mshengu uveze ukuthi kunezinkulumo ezingafanele ukukhulunywa esidlangaleni i ngoba ezangaphakathi kwi-ANC.
Uqhubeke wacela abantu babhekisise izinto okungafanele bazikhulume ezidlangalaleni ngoba zinomthelela ekujikeni isimo.
Uphethe ngokuthi lokhu kuzolandelwa ngokubheka amavidiyo ukuthola obhongoza athi kumele baqondiswe izigwegwe.
Lesi simo sihlule ngisho sekungenelela uSihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala ezama ukutshela abebecula ukuthi mababeke phansi imimoya phansi kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
Lokhu kugqamise olukhulu uqhekeko lokungaboni ngaso linye kwabaholi ngaphakathi kulenhlangano.
UMnuz Zikalala uthe lesi senzo ngesobudlwembe nokungalaleli kumalunga abo futhi akuhambisani neqembu.
Unxuse abantu ngokwehlisa imimoya baphinde basebenzise imigudu efanele ukuphakamisa izikhalo abanazo kodwa bangaphazamisi ngesikhathi esingafanele.
‘Akumele uphekele ukuthi ujahe imali’